आउ डा. शेखर, तिमीलाई सिङ्गो कांग्रेसले पर्खिरहेको छ ! « Nepal Bahas
आउ डा. शेखर, तिमीलाई सिङ्गो कांग्रेसले पर्खिरहेको छ !
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७८, शनिबार १२:०१
वर्तमानको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले आउँदो महाधिवेशनबाट विधिवत रुपमा बिदा लिदैछ । नेपाली कांग्रेस अहिले नयाँ नेतृत्व जन्माउने प्रशव वेदनामा छ । महिना पुगि सकेर पनि नेतृत्व जन्माउन नसक्दा कतै नयाँ आउने नेतृत्वलाई कुनै अप्ठ्यारो र असहजता पो परिरहेको छ कि रु आउने नेतृत्वलाई छेकवार गर्ने परजिविहरु पो सल्वलाईरहेका छन कि ? भन्ने आशंकाहरु पनि उव्जन थालेका छन् ।
वर्तमान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा दुई दुई वटा कांग्रेस पार्टीको सभापति भएको अनुभवलाई सम्हाल्दै नेपाली कांग्रेसको चौधौ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गराउने छन् भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण नेतृत्व र आम कार्यकर्ताहरुको विश्वास रहँदै आएको थियो । तर देउवामा त्यो शाहस र हिम्मत विस्तारै पलायन हुदै गईसकेको देखिदैछ । कांग्रेसको कमजोर नेतृत्व र अवसरबादी र लुब्धर आशावादी महत्वकांक्षी गुटगत नेता तथा कार्यकर्ताहरुको द्रव्यमोह र पदलोलुपताका पछाडि दौडने निरिह कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताका कारण वर्तमान देउवा नेतृत्वको कांग्रेस अब धमिराले खाएर मक्काएको धँयेराको काठ झै बनिसकेको छ ।
जीर्ण अवस्थामा पुग्न आँटेको कांग्रेसलाई पुनः दर्बिलो बनाउन एउटा मुल खाँबोको आवश्यकता परिरहेको कुरा अहिले तमाम कांग्रेसजनमा महशुश समेत भैरहेको छ । मक्काएका बलाहरु फेर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ । कुनैबेला नेपाली जनताको आँखामा र मनमुटुमा बस्न सक्ने नेता भएको पार्टी, कुनैबेला जनताका समस्यामा साथदिदै देशको बिकास निर्माणमा सहभागी हुने पार्टी, कुनै बेला नेपाली जनताले असाध्यै आशा गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले ओईलाएको दुवो झै कक्रक्क भएको छ ।
अब फेरि एकपटक यसरी जीर्ण र कमजोर बनेको, नेपाली कांग्रेसलाई फेरी एकपटक सवल र सक्षम कांग्रेस बनाउने बेला आएको छ । ईमानदार भएर सच्चा कार्यकर्ता बनेर भोलिका लागि पनि नेपाली कांग्रेस लाई जोगाएर राख्ने हो भने अब एकपटक नेपाली कांग्रेसको रेक्ट्रोफिटिङ्ग गर्ने बेला आएको छ जसको जिम्मा अब डा. शेखर कोईरालाले लिनुपर्छ भनेर आम कांग्रेस बृत्तमा कुरा उठिरहेको छ ।
अब सिंगो नेपाली कांग्रेसलाई एक बनाउनु परेको छ । निराशामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र शुभचिन्तक तथा समर्थकहरुलाई पुनः जुर्मुराउने कांग्रेस बनाउनु परेको छ । पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढिकरणका पक्षमा मेची महाकाली अभियान चलाउनु परेको छ । दुःखेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको मनको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनु परेको छ ।
यी यावत कुराहरुको लागि अब नेपाली कांग्रेसलाई एक दर्बिलो नेतृत्वको आवश्यकता परेको छ । सबै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको आँखा डा.शेखर कोईरालामा परेको छ । आफ्नो काँधमा आउन लागेको महान जिम्मेबारी बोक्न, नेपाली जनताको नेपाली कांग्रेसप्रति पलाएको बितृष्णा रोक्न, सुकेको रुखको जरामा पुग्ने गरी सिंचित गर्दै पुनः हराभरा हरियो आकारमा ल्याउन डा। शेखर कोईरालाले अब पछाडि पर्नु हुदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सिंगो कांग्रेसका आशावादी नेता, भरोसा र आस्थाका धरोहर, आफ्नो राजनीतिक आस्था र विचारमा भिष्मपितामह झै अडिग, तमाम नेपालीका विश्वास जितेका, हाम्रा नेता, राम्रा नेता, नेपाली कांग्रेसका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई म नेपाली कांग्रेस हुँ भनेर गर्व गर्न लायक बनाउने, प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक मार्ग बनाउने, कुनै पनि राजनीतिक दलको पुच्छर नबन्ने, सासु र बुहारीका लागि सिद्धान्त बेच्छु नभन्ने, नेपाली कांग्रेसलाई पुरानो कांग्रेस बनाउने, निष्ठा र विचारको राजनीतिलाई आफ्नो मार्गचित्र बनाउने यस्ता राजनीतिक सिद्धहस्त युगपुरुषलाई यसपटक नेपाली कांग्रेसको सभापति बनाउनु परेको छ ।
साच्चै भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका लागि डा.शेखर कोईराला निभ्न आँटेको दियोको तेल हुन, भोकाएका नेपाली नागरिकका लागि भोक मेटाउने सेल हुन । अभावमा रहेका र दवावमा पारिएका नागरिकहरुकाे आशामा केन्द्र हुन । हामी सबै नेपालीका लागि उनी एकमात्र उज्याला चन्द्र हुन । खिया लागेर र फोहोर जमेर बसेको नेपाली कांग्रेस पार्टी उजिल्याउने शान हुन । ओईलाएको रुखलाई सिञ्चित गर्दै हरियाली छर्ने माली हुन । देशका कुना कन्दरामा रहेका बाँझो जमिन जोतेर बाली लगाउन सहयोग गर्ने फाली हुन । पार्टीलाई व्यक्तिगत गुट उपगुटको सिण्टिकेट चलाउन खोज्नेहरुलाई उडाएर लैजान सक्ने आँधीतुफान हुन, पार्टीभित्रको दुर्गन्ध र फोहोर ढल बढारेर लैजाने कोशी, गण्डकी र महाकाली हुन ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी बिधानलाई आफ्नो सर्वोपरी मार्ग निर्देशन ठान्ने, पार्टीका ईमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो दुई पाखुरा मान्ने, डुब्न लागेको कांग्रेसलाई बचाउन, तमाम नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कुँडिएको मन फेरि एकपटक हँसाउन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमाल, पहाड, तराई मधेशका कार्यकर्ताले आफ्नै प्यारो कांग्रेस पार्टी भन्न सक्ने बनाउन, वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वका कारण झुकेको नेता तथा कार्यकर्ताहरुको शिर ठाडो पार्दै, अनेक दुःख र कष्टका हुरी बतास र समस्याहरु मिलेर फाल्दै सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसले अब एकैस्वरमा भन्न परेको छ, अबको आशा तिम्रै उपर मात्रै रहेको छ ।
त्यसैले डा. शेखर तिमी अब पार्टीको नेतृत्वमा आउनै पर्छ, कांग्रेसले त्राण पाउनै पर्छ । नेपाली कांग्रेसलाई बितगदेखि वर्तमानसम्म नेतृत्व गरेका अति आदरणिय नेतृत्वबाट आगामी कांग्रेसको आशा लाग्दो परिणाम निस्कन्छ भन्ने छाँट देखिएन । अझै भनौ मोही पकाएर तर ‘छाली’ लाग्छ कि भन्ने नेपाली जनताको आशामा तुषारापात परिसकेको छ । वर्तमान पार्टी नेतृत्वबाट सिंगो कांग्रेस बन्छ भन्ने आशा मरिसकेको छ ।
तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मरेको आशा जगाउन, भ्रष्टहरुको संरक्षण र कमिशनको गोलचक्करमा फँसेका नेताहरुलाई सबक सिकाउन, पार्टी भित्रका ईमान्दार र कर्मठ सबै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मिलेर शुद्ध कांग्रेस र सवल कांग्रेस बनाउन सकिन्छ भन्ने आम कार्यकर्ताहरुमा भरोसाको दियो जलाउन, आउ डा. शेखर आउ, तिमी आए सुस्ताएको हिमाल हाँस्नेछ, नाँच्न बिर्सिएका मुनाल र डाँफे नाँच्नेछन् । तराईका फाँटहरुले, अनि पहाडका पाखाहरुले खोई शेखर भनिरहेछन् ।
तिमी नेतृत्वमा नआएकोले नै देशका कुना कन्दरा, पहाडका भीर र खोलाका तिरमा बर्षौ बिताई रहेका तमाम नेपाली रोईरहेछन् । तिमी सिंगो नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेर आउ । बीपीको सपना बोकेर आउ, सगरमाथाको शिर जस्तै उच्च विचार राखेर आउ । तिमी आयौ भने त हामी पनि दिल खोलेर हाँस्ने छौ । सिंगो कांग्रेस एक भयो भनेर हामी पनि खुशीले नाँच्नेछौ । त्यति भए पछि भ्रष्टहरुका नलीखुट्टा भाँच्नेछौं । नेपालीलाई एउटै मालामा गाँस्नेछौं ।